Japana: Ampio ireo izay manampy · Global Voices teny Malagasy
Japana: Ampio ireo izay manampy
Voadika ny 27 Mey 2011 21:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Aymara, 日本語, English
Saritanin'ny tanàna misy ireo traboina nafindra tao Japana
Roa volana izay no lasa taorian'ilay horohorontany sy tsunami tao Japana. Afaka manohy ny fiainany ara-dalàna ireo izay tsy tratran'ny horohorontany mivantana, olona eo amin'ny 110 000 no mbola mialokaloka anaty trano lay, araka ny fanombatomban'ny polisy.
Ny tsy fananana fiainana manokana, ny fisarahana amin'ny fianakaviana sy ny namana mahazatra, ny tsy fisian'ny asa atao, ary ny alahelo lalina noho ny famoizana olona akaiky no zavatra iainan'ireo traboina isan'andro, izay tena reraka ara-batana sy ara-tsaina tanteraka.
Hiroshi Moriwaki nanazava ireo karazana ratram-panahy ary nangataka koa mba hijerena akaiky sy hitsaboana indrindra ny zazakely ary koa ny olon-dehibe, izay samy manana ny sarangany, nisy fiatrainkany ara-tsaina mavesatra tokoa ny fizakan'izy ireo ny zava-misy mampahonena.
Maro ireo zava-miseho hitan'ny masonay isan'andro. Raha misy zavatra tsy ampoizina tampoka miseho, tahaka ny voina, na olana, afaka ny hiatrika izany isika mandritra ny fotoana maharitraritra.
Kanefa, tsy afa-mikofoka isika amin'ny retsika mahery vaika na manaitaitra izay tsy zakan'ny fifehezantenantsika, tahaka ny loza voajanahary na heloka bevava. Misy fiantraikany lehibe amintsikaireny ka lasa ratram-po na ratram-panahy.
Misy karazany roa ny ratram-panahy: ny ratram-panahy manindrona, noho ny voina mahatsiravina na ny loza lehibe sy ny ratram-panahy raiki-tampisaka, avy amin'ny zavamiseho toy ny fanararaotana sy ny herisetra ara-batana.
Ny fambara dia miseho amin'ny nofy ratsy, ny tsiaro ny loza, ny aretin'andoha, ny vavony ary ny loiloy ny fambara miseho. Ny zazakely indrindra indrindra no voakasiky ny tsiaro ny loza miverimberina, ary mitovy ny dona nahazo azy ireo voalohany mihitsy ny mahazo azy.
Nandritra ny horohorontany mahery vaika, maro ireo tra-boina no niatrika fientanam-po mbola tsy niainany nandritra ny fiainany andavanandro. koa satria moa natrehin'ny mason'izy ireo ny horohorontany, tao anatin'ny tahotra ny loza goavana nanatona azy ireo, nisy angamba ireo nahita ny fianakaviany na ny namany natelin'ny voina. Ny hafa kosa nahita maso mivantana ny vata mangatsiakan'ny fianakaviany taorian'ny loza.
Na dia afaka miaritra ireny zava-nitranga ireny amin'ny alalan'ireo tranga izay efa niainany taloha sy ireo karazana fiotanam-po efa tsapany aza ny olon-dehibe, dia mety hamela ny holatry ny ratram-po mandritra ny fiainana manontolo ho an'ireo ankizy tanora kosa izany. Manjary lasa zava-dehibe tokoa ny fanohanana an'ireo mpilatsaka antsitra-po, toy ny miaramila, ny polisy ary ny mpamonjy voina, sns.
Raha mijery ny karazana fikorontanan-tsaina taoriana ratram-po isika dia hitantsika fa olona voaofana manokana ihany no afa-miatrika ireny ary fotoana maharitra mihitsy ny fitsaboana azy.
Tena ilaina tokoa ny fanohanana mandritra ny fotoana elaela avy amin'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny orinasa, ny governemanta, ary ny oniversite.
Nafindra tao amin'ny sekoly ambaratonga ambany ireo marary taorian'ny horohoron-tany Sary Natsukado, CC BY-NC-ND.
Hatramin'ny nisian'ny zava-mitranga, ekipa mpilatsaka an-tsitrapo sy manam-pahaizana, toy ny dokotera, mpitsabo mpanampy, ny mpahay momba ny toe-tsaina, no nirohotra nankany amin'ny faritra voaravan'ny horohorontany hanao asam-pamonjena. Mirotsaka mivantana aminy fanomezana fanafody ny sasany, ny hafa mihaino fotsiny ihany ny tantara mahonena sy ny fahoriana niainan'ireo traboina .
Noho ny asan'izy ireo, izay zatra miasa amin'ny toe-javatra manahirana sy maika toy izao, dia te-hiasa mandritra ny ora maro izy ireo ary hita fa zavatra mahazatra matetika ny fikirizana asehon'izy ireo. Indrisy fa indraindray dia adino fa amin'ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy ireo, dia misy ireo izay traboina sy very havana, namana sy trano ihany koa.
Izany indrindra no antony nahatonga ny Ivon-toerana tsy miankina na izay vatsian'ny governemanta vola nanantosa ny fanentanana mba hametrahana ny famonjena amin'ny loza ateraky ny havizanana ary mangataka azy ireo mba hitsabo ny tenany manokana aloa, mba ahafahany manampy tsara ny hafa.
Milaza ny zava-nianan'ny namana iray, @jishin milaza ny sorisorin-tsaina ara-piontanampo sy ara-batana izay tsy maintsy atrehin'ny dokotera. Araka ny hevitry ny mpanoratra iray ao amin'ny bilaogy antsoina hoe Information on Psychological Care Related to the Earthquake’ na ” Tsara ho fantatra momba ny fitsaboana ara-tsaina mifandraika amin'ny horohorontany, nisy ny fiofanana nataon'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy mba hanomezany ny fitsaboana tsara indrindra mandritra ny famonjena voina maika toy izao, amin'izao toe-draharaha sarotra toy izao indrindra no tena ilàna ny fanohanan'olon-kafa.
Nahare sombin-tantara avy amin'ny namako koa aho, izay anisan'ireo dokotera nalefa any amin'ny faritra misy ny loza. Niasa tao anatin'ny toe-javatra tena sarotra izy izay nahatsapako fankasitrahana azy noho ny fahaizany manokana, tamin'ny fiaretany nandritra izany fahoriana mamaivay izany.
Nandritra izany, nahatsapa aho fa zavatra iray tena maika ary ilaina ny fanohanana noho ny faharerahany aram-po sy ara-batana. Nalahelo tokoa aho raha nahare azy nitaraina fa tsy afaka miasa intsony izy noho ny tsy fisian'ny fitaovana sy ny mpiasa, na dia teo aza ireo ezaka nasehony.
Azo lazaina fa olona be herimpo ireo izay niasa tamin'ny famonjena maika ireo naratra mila vonjy aina nandritra ‘ireo krizy’, ‘mba hanampy ireo malemy’. Izany indrindra no antony mahatonga ny fanohanana azy ireo nanjary noadinodinoina.
Saingy ny fiatrehana hatrany ireo karazana ratra, fahafatesana, sy ny hirifiry ao anatin'ny toe-javatra tsy azo eritreretina, sy ny fiezahana hitony hatrany (ohatra, tsy mitomany) ao anatin'izao toe-javatra izao no mety hitarika faharerahana aram-po sy ara-batana, na amin'iza na amin'iza, na dia karazan'olona Superman aza izy. Zavatra mahazatra izany.
Manao zavatra sarotra izy ireo ao anaty toe-javatra sarotra, izany indrindra no antony tokony hanohanana azy ireo, ny hanampiana azy, mba ho fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana ho azy ireo, ka ahafahany amin'izay manampy ireo traboina hafa.
Etsy andaniny, tsy te hilaza ny fahoriany sy ny fijaliany ireo izay mandray anjara amin'ny famonjena ireo traboina, satria ‘ Izahay dia ireo izay manampy. Tsy afaka hampiseho fahosana izahay’. Araka izany dia zava-dehibe ho an'ny fianakaviana, ny namana, ny fikambanana manodidina azy ireo ny mahafantatra ny filàna fanampiana ho an'ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy mpitsabo vonjiaina, ary hanome azy ireo ny fanohanana rehetra ilainy.
Farany, nilaza ny manam-pahaizana manokana ny toe-tsaina Satoko fa tsy tokony hihevitra ny “faharerahan'izy ireo noho ny voina” ho toy ny “fahosana’ ireo mpilatsaka an-tsitrapo sy mpamonjy voina matihanina.
Misy ireo traboina izay manampy ho toy mpilatsaka an-tsitrapo. Azafady, mangalà aina tsara ianao fa aza mandrera-tena.
Zavatra voajanahary ny tratry ny aretina sy reraka.
Fa tsy hoe satria osa ianao!
Nadikan'i Rino Yamamoto ny sombiny amin'ireo bilaogy japoney .